I-resin ye-Keng lye yokwenene kunye ne-acrylic layered 3D Izilwanyana | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzobi wase-Singapore UKeng Lykunye nokudala Imifanekiso eqingqiweyo efana nezilwanyana ekhangeleka iyinyani, ipeyinti, i-resin kunye nembono ebonakalayo yokujonga izinto. I-La Lye igcwalisa kancinci izitya, iibhakethi kunye neebhokisi ezinokutshintsha kweendlela Ipeyinti ye-acrylic kunye nentlaka, Kwaye yenza ubomi bamanzi obubonakala buyinyani kangangokuba ubunokuphantse buthabathe ifoto. Umzobi usebenzisa ubuchule obufana ncam nomzobi waseJapan URiusuke Fukahori eyayibonakaliswe kule bhlogi ngaphezulu konyaka odlulileyo, nangona uLye kubonakala ngathi uthatha izinto inyathelo eliya phambili ngokwenza indalo yakho yokupenda incamathela ngaphandle, ukongeza elinye inqanaba lobukhulu.
Ndiqale uthotho lwam lokuqala ngo-2012, apho yonke imizekeliso yayi "tyaba" kwaye ubunzulu benziwa kusetyenziswa iileyile zentlaka kunye ne-acrylic ngaphezulu kweendawo ezahlukeneyo zomzekeliso. Ii-octopus yayililinge nje, ndandifuna nje ukubona ukuba andinako ukutyhala obu buchule ukuya kwinqanaba eliphezulu. Emva kokufaka ipeyinti ye-acrylic ngokuthe ngqo kwi-resin, ndafaka into ye-3D kule meko, yayililitye elincinci le-octopus. Ufudo ndasebenzisa iqokobhe leqanda kunye nepeyinti ye-acrylic xa sele ndigqibile. Umbono apha yayikukunika umsebenzi wobugcisa isiphumo esingakumbi se-3D ke ngoko unokubonwa ngcono kuyo nayiphi na i-engile. Ndicinga ukuba kusekho ezinye iindlela ezininzi zokuhlola.
Ukuze icace, izinto eziphuma phezulu kwintlaka ngamaqhekeza asemzimbeni Ezipeyintiweyo ukutshatisa i-acrylic kunye ne-resin layer, nantsi intle igalari ngemisebenzi yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » I-resin ye-Keng lye eyiyo kunye ne-acrylic ekhethiweyo yeZilwanyana ze-3D
Ixabiso elibaluleke kakhulu likaPstrong xa kuziwa ekubaliseni ibali